के होला त पद्मावती रिलिज ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
के होला त पद्मावती रिलिज ?
फिल्मी फण्डा । फिल्म पद्मावती घोषण मिती देखि नै निर्देशक संजय लिला भन्साली तनावमा परेका छन् । रिलिज मिति नजिकीदैँ गर्दा विभिन्न कारणले असन्तुस्त भएका भन्सालीको यो फिल्म ‘राजपुत समुदाय’ले सजिलै रिलिज हुने नदिने भएको छ ।
यो चलचित्र रानी ‘पद्मिनी’को प्रेमकथामा आधारित रहेको छ । यो चलचित्रमा दीपिका पादुकोण ‘पद्मिनी’, साहिद कपूर ‘राजा रत्नरावल’ र रणवीर सिंह ‘अलाउद्दीन खिलजी’को भूमिकामा रहेका छन् । चलचित्र भित्र समावेश रानी ‘पद्मिनी’ र अलाउद्दीन खिलजीको ‘ड्रिम सिन’को कारण बलिउड सिने नगरी तातिएको हो । र राजपुतहरु चाहान्छन् कि उक्त सिन फिल्म बाट हटाइयोस् । किनभने रानी ‘पद्मिनी’ र अलाउद्दीनको कहिले पनि भेट भएको थिएन ।
राजपुत महिलाहरुको प्रेरणाको स्रोत रहेकी ‘पद्मिनी’लाई ‘अलाउद्दीन’ जस्तो क्रुर, हिंस्रक शासकसँग जोड्नुले राजपुत महिलाहरुको प्रेरणामा धक्का पर्ने राजपुतनहरुको गुनासो छ । जसकारण हरियाणाका मन्त्री विपुल गोयलले र मन्त्री स्मृति ईरानीले निर्देशक भन्सालीलाई पत्र लेखेका छन् । यतिमात्र नभई आइतबार २५ जनाको राजपुत टोलिले निर्देशक भन्सालीको अफिस अगाडी विरोध पनि गरेका थिए ।
उता निर्देशक भन्साली भने सिनेमामा कुनैपनि ‘ड्रिम सिन’ नरहेको र रानी ‘पद्मिनी’को व्यक्तित्वमा आँच आउने कुनै पनि सिन समावेश नगरिएको भिडियोद्वारा जानकारी दिएका थिए । तर, पनि राजपुत समुदायले ‘पद्मावती’मा ‘पद्मिनी’को प्रकिति विपरित सिनेमामा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाईरहेका छन् ।